06.10.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– जसरी बाबाले भविश्य २१ जन्मको लागि सुख दिनुहुन्छ , त्यसैगरी तिमी बच्चाहरू पनि बाबाको सहयोगी बन , प्रीत-बुद्धि बन । दु:ख दिने ख्याल कहिल्यै पनि नआओस्।”
तिमी रूप-बसन्त बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? तिमीलाई बाबाको कुनचाहिँ शिक्षा मिलेको छ?
तिमी रूप-बसन्त बच्चाहरूको कर्तव्य हो मुखबाट सदा रत्न निकाल्नु, तिम्रो मुखबाट कहिल्यै पनि पत्थर निस्किनु हुँदैन। सबै बच्चाहरूलाई बाबाको शिक्षा छ– १) आपसमा कहिल्यै पनि एक-अर्कालाई दु:ख नदेऊ, नरिसाऊ। यो आसुरी मनुष्यको काम हो। २) मनसामा पनि कसैलाई दु:ख दिने ख्याल नआओस्। ३) निन्दा-स्तुति, मान-अपमान सबै कुरा सहन गर। यदि कसैले केही भन्यो भने पनि शान्त रहने गर। कानून हातमा लिनु हुँदैन।
ज्ञान र अज्ञान। तिमी बच्चाहरूमा अहिले ज्ञान छ– भक्तहरूले कसको महिमा गर्छन् र तिमी बच्चाहरू जो यहाँ बसेका छौ कसको महिमा गर्छौ? रात-दिनको फरक छ। उनीहरूले त त्यसै महिमा गाइरहन्छन्। त्यति प्यार हुँदैन किनकि पहिचानै छैन। तिमीलाई बाबाले पहिचान दिनुभएको छ– म प्यारको सागर हुँ र तिमीलाई प्यारको सागर बनाइरहेको छु। प्यारको सागर बाबा सबैलाई कति प्यारो लाग्छ। त्यहाँ पनि सबैले एक-अर्कालाई प्यार गर्छन्। यो तिमीले यहाँ सिक्छौ। कसैसँग पनि विरोध हुनु हुँदैन, जसलाई बाबाले नुनपानी भन्नुहुन्छ। भित्र कसैप्रति पनि घृणा हुनु हुँदैन। घृणा गर्ने कलियुगी नर्कवासी हुन्। जानेका छौ– हामी सबै भाइ-बहिनी हौं। शान्तिधाममा रहँदा भाइ-भाइ हौं। यहाँ जब कर्मक्षेत्रमा पार्ट खेल्छौं भने भाइ-बहिनी हौं। ईश्वरीय सन्तान हौं। ईश्वरको महिमा हो– उहाँ ज्ञानको सागर, प्रेमको सागर अर्थात् सबैलाई सुख दिनुहुन्छ। तिमीले दिलसँग सोध– जसरी बाबाले २१ जन्म सुख दिनुहुन्छ त्यसैगरी मैले पनि त्यही कार्य गर्छु? यदि बाबाको सहयोगी बन्दैनौ, प्यार गर्दैनौ, एक-अर्कासँग प्रीत छैन, विपरीत बुद्धि भएर रहन्छौ भने विनश्यन्ति हुन्छौ। विपरीत बुद्धि हुनु असुरको काम हो। आफूलाई ईश्वरीय सम्प्रदाय भनेर फेरि एक-अर्कालाई दु:ख दिने तिनलाई असुर भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूले कसैलाई पनि दु:ख दिनु हुँदैन। तिमी हौ नै दु:खहर्ता सुखकर्ता बाबाका बच्चाहरू। त्यसैले दु:ख दिने ख्याल पनि तिमी बच्चाहरूलाई आउनु हुँदैन। उनीहरू त हुन् नै आसुरी सम्प्रदाय, नकि ईश्वरीय सम्प्रदाय किनकि देह-अभिमानी छन्। उनीहरू कहिल्यै पनि यादको यात्रामा रहन सक्दैनन्। यादको यात्रा विना कल्याण हुँदैन। वर्सा दिने बाबालाई त अवश्य याद गर्नुपर्छ अनि विकर्म विनाश हुन्छ। आधाकल्प त एक-अर्कालाई दु:ख दिदै आएका छौ। जो एक-अर्कासँग लडाई गर्ने, दु:ख दिने काम गरिरहन्छन्, उनीहरू आसुरी सम्प्रदायमा गनिन्छन्। पुरुषार्थी त छौ नै तर पनि कहिलेसम्म दु:ख दिइरहन्छौ त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– चार्ट राख। चार्ट राख्नाले थाहा हुन्छ– मेरो रजिस्टर सुध्रिदै गएको छ या उही आसुरी चालचलन छ? बाबाले सधैं भन्नुहुन्छ– कहिल्यै पनि कसैलाई दु:ख नदेऊ। निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, ठण्डी-गर्मी सबै सहन गर्नु छ। कसैले केही भन्छ भने शान्त रहनु पर्छ। यस्तो होइन– उनीहरूलाई दुई वचन भनिदिउँ। कसैले कसैलाई दु:ख दिन्छ भने उनीहरूलाई बाबाले सम्झाउनु हुन्छ नि। बच्चाले बच्चालाई सम्झाउन सक्दैनन्। कानूत हातमा लिनु हुँदैन। केही कुरा छ भने बाबाको पासमा आउनु पर्छ। गभर्मेन्टमा पनि नियम हुन्छ– कसैले एकले-अर्कालाई घुस्सा हान्न सक्दैन। शिकायत गर्न सक्छ। कानून लागु गर्नु गभर्मेन्टको काम हो। तिमी पनि गभर्मेन्टको पासमा आऊ। हातमा कानून नलेऊ। यो त हो नै आफ्नो घर त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– सधैं कचहरी गर। यो पनि बुझ्दैनन्– शिवबाबाले अर्डर गर्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुभएको छ– सधैं सम्झ शिवबाबाले सुनाउनु हुन्छ। ब्रह्माले सुनाउँछन्, यो नसम्झ। सधैं शिवबाबाले नै सम्झाउनु हुन्छ– यो कुरा सम्झ्यौ भने शिवबाबाको याद रहन्छ। तिमीलाई ज्ञान सुनाउनको लागि शिवबाबाले यो रथ लिनु भएको छ। सतोप्रधान बन्ने मार्ग बाबाले बताइरहनु भएको छ। उहाँ गुप्त हुनुहुन्छ। तिमी छौ प्रत्यक्ष। जति पनि डाइरेक्सन निस्कन्छन् ती शिवबाबाका हुन्– यो स्मृति भएमा सुरक्षित रहन्छौ। तिमीले बाबा-बाबा शिवलाई नै भन्छौ। वर्सा पनि उहाँबाट नै मिल्छ। उहाँको साथमा कति रिगार्ड, रोयल्टीसँग चल्नुपर्छ। तिमीले भन्छौ नि– बाबा हामी त लक्ष्मी-नारायण बन्छौं। फेरि सेकेन्ड, थर्ड बन्यौ, सूर्यवंशी बनेनौ भने चन्द्रवंशी बन्छौ। यस्तो होइन, ठीकै छ म दास-दासी नै बन्छु। प्रजा बन्नु त राम्रो होइन। तिमीले त यहाँ दैवीगुण नै धारणा गर्नु छ। आसुरी चालचलन त हुनु हुँदैन। निश्चय छैन भने फेरि बस्दा-बस्दै यो भनिदिन्छन्, यिनमा शिवबाबा आउनु हुन्छ– म त मान्दिनँ। मायाको भूत आउनाले आपसमा यस्तो भनिदिन्छन्। आपसमा आसुरी स्वभाववाला भेटिए भने फेरि यसरी बोल्न थाल्छन्, अनि आसुरी कुरा नै मुखबाट निस्कन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी आत्मा रूप-बसन्त बन्छौ। तिम्रो मुखबाट रत्न नै निस्कनुपर्छ। यदि पत्थर निस्कन्छ भने आसुरी बुद्धिका ठहरियौ।
गीत पनि बच्चाहरूले सुन्यौ। बच्चाहरूले भन्छन्– बाबा प्यारको सागर हुनुहुन्छ, सुखको सागर हुनुहुन्छ। शिवबाबाको नै महिमा हो। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यसमा धेरै राम्रा-राम्रा बच्चाहरू पनि फेल हुन्छन्। देही-अभिमानी स्थितिमा टिक्न सक्दैनन्। देही-अभिमानी बन्यौ भने यति उच्च पद पाउँछौ। कति बच्चाहरूले फाल्तु कुरामा समय धेरै खेर फाल्छन्। ज्ञानको कुरा नै ध्यानमा आउँदैन। यो पनि गायन छ– घरको गंगाको मान राख्दैनन्। घरको चीजको यति मान राख्दैनन्। जबकि कृष्ण आदिको चित्र घरमा छ भने फेरि श्रीनाथ द्वारे आदि यति टाढा-टाढा किन जान्छन्? शिवको मन्दिरमा पनि हुन त पत्थरको नै लिंग छ। पहाडबाट पत्थर निस्कन्छ, त्यो घोटिँदा-घोटिँदै लिंगाकार बन्छ, तिनमा कुनै-कुनै पत्थरमा सुन पनि लागेको हुन्छ। भनिन्छ सुनको कैलाश पर्वत। सुन पहाडबाट निस्कन्छ नि। त्यसैले अलि-अलि सुन लागेका पत्थर पनि हुन्छ जुन फेरि धेरै राम्रो-राम्रो गोलो बन्छ, त्यसलाई बेच्छन्। खासगरी मार्बलको पनि बनाउँछन्। अब भक्तहरूलाई तिमीले बाहिर किन यति भड्किनुहुन्छ भनेमा रिसाउँछन्। बाबा स्वयंले भन्नुहुन्छ– तिमी बच्चाहरूले धेरै पैसा बर्बाद गरेका छौ। ड्रामामा यो पार्ट पनि छ जसले गर्दा तिमीलाई धक्का खानुपर्छ। यो हो नै ज्ञान र भक्तिको खेल। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सारा समझ मिल्छ। ज्ञान हो सुखको बाटो, ज्ञानबाट सत्ययुगको राजाई मिल्छ। यस समयमा राजा-रानी तथा प्रजा सबै नर्कका मालिक छन्। जब कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो। यी कुरालाई तिमीले अहिले बुझेका छौ। अहिले तिमीले भन्छौ– हामी स्वर्गवासी बन्नको लागि स्वर्गको स्थापना गर्ने बाबाको पासमा बसेका छौं। ज्ञानको बूँद मिल्छ। अलिकति पनि ज्ञान सुन्यौ भने स्वर्गमा अवश्य आउँछन्, बाँकी हुन्छ पुरुषार्थमा आधारित। सम्झन्छन्– गंगाजलको पात्रबाट एक बूँद मात्रै पनि मुखमा राख्नाले पतितबाट पावन बनिन्छ। लोहोटा भरेर लैजान्छन् अनि हरेक दिन त्यसबाट एक-एक थोपा पानीमा मिसाएर स्नान गर्छन्। त्यो मानौं गंगा स्नान हुन्छ। बेलायतमा पनि गंगा जल भरेर लैजान्छन्। यो सबै हो भक्ति।
बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! मायाले धेरै जोडसँग थप्पड लगाउँछ, विकर्म गराइदिन्छ त्यसैले कचहरी गर, आफैंले आफ्नो कचहरी गर्नु राम्रो हो। तिमीले स्वयं राजतिलक दिन्छौ त्यसैले आफ्नो जाँच गर्नु छ। तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्नु छ। बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ यसो-यसो गर, दैवीगुण धारणा गर। जसले गर्छ उसले पाउँछ। तिम्रो त खुसीले रोमांच खडा हुनुपर्छ। बेहदको बाबा मिल्नुभएको छ, उहाँको सेवामा सहयोगी बन्नु छ। अन्धाहरूको लठ्ठी बन्नु छ। जति बढी बन्छौ त्यति आफ्नै कल्याण हुन्छ। बाबालाई त घरी-घरी याद गर्नु छ। ध्यानमा एकै ठाउँमा बसिरहने कुरा होइन। हिँड्दा-डुल्दा याद गर्नु छ। ट्रेनमा पनि तिमीले सेवा गर्न सक्छौ। तिमीले कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ– उच्च भन्दा उच्च को हुनुहुन्छ? उहाँलाई याद गर। वर्सा उहाँबाटै मिल्छ। आत्मालाई बाबाबाट बेहदको वर्सा मिल्छ। कसैले दान-पुण्य गर्यो भने राजाको पासमा जन्म लिन्छ, त्यो पनि अल्पकालको लागि। सदाको लागि राजा त बन्न सक्दैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– यहाँ त २१ जन्मको लागि ग्यारेन्टी छ। त्यहाँ यो थाहा हुँदैन– हामीले बेहदको बाबाबाट यो वर्सा लिएर आएका हौं। यो ज्ञान यस समयमा तिमीलाई मिल्छ त्यसैले कति राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। पुरुषार्थ गर्दैनौ अर्थात् आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्छौ। चार्ट लेख्यौ भने डर हुन्छ। कसै-कसैले लेख्छन् पनि, बाबाले हेर्नुभयो भने के भन्नुहोला। चालचलनमा धेरै फरक हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– अभिमान छोड। नत्र धेरै पछुताउनु पर्नेछ। आफ्नो पुरुषार्थको फेरि अन्त्यमा साक्षात्कार अवश्य हुन्छ फेरि धेरै रुनुपर्छ। के कल्प-कल्प नै यो वर्सा मिल्छ? गएर दास-दासी बन्छौ। पहिला त ध्यानमा गएर सुनाउँथे– फलानी दासी हो, यो हो। फेरि बाबाले बन्द गरिदिनु भयो। पछि गएर फेरि तिमी बच्चाहरूलाई साक्षात्कार हुन्छ। साक्षात्कार विना सजाय कसरी मिल्न सक्छ? नियम नै छैन।
बच्चाहरूलाई युक्ति पनि धेरै सम्झाइन्छ, तिमीले आफ्नो पतिलाई भन, बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! काम महाशत्रु हो, यसलाई जित। मायालाई जितेर जगतजित बन। अब म स्वर्गको मालिक बनूँ या तपाईंको कारणले अपवित्र बनेर नर्कमा जाऊँ। धेरै प्यार, नम्रतापूर्वक सम्झाऊ। मलाई नर्कमा किन धकेल्नुहुन्छ? यस्ता धेरै बच्चीहरू छन् जसले सम्झाउँदा-सम्झाउँदा आखिर पतिलाई लिएर आउँछन्। फेरि पतिले भन्छ– यी मेरी गुरु हुन्, यिनले मलाई धेरै राम्रो मार्ग बताइन्। बाबाको अगाडि चरणमा आएर गिर्छन्। कहिले जित कहिले हार पनि हुन्छ। तिमी बच्चाहरू धेरै मीठो बन्नु छ। जसले सेवा गर्छ ऊ नै प्यारो लाग्छ। भगवान बाबा बच्चाहरूको पासमा आउनु भएको छ भने उहाँको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। श्रीमतमा चल्दैनन् भने तुफान लाग्नाले गिर्न पुग्छन्। यस्ता पनि छन्– उनीहरू के कामका रहन्छन्। यो पढाइ कुनै साधारण होइन, अरू सत्सङ्ग आदिमा त हुन्छ– कनरस, जसबाट अल्पकालको सुख मिल्छ। यहाँ बाबाबाट त २१ जन्मको सुख मिल्छ। बाबा सुख-शान्तिको सागर हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि बाबाबाट वर्सा मिल्नु छ। सेवा गर्छौ भने त मिल्छ, त्यसैले ब्याज सदा लगाइराख। हामी यस्तो सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ। जाँच गर्नु छ– मैले कसैलाई दु:ख त दिन्नँ? आसुरी चालचलन त छैन? मायाले यस्तो काम गराउँछ, कुरै नसोध। राम्रा-राम्रा घरकाले पनि बताउँछन्, मायाले यो विकर्म गरायो। कसैले साँचो बताउँछ, कसैले साँचो नबताउनाले सय गुणा दण्ड पाउँछ। फेरि त्यो बानी बढ्दै जान्छ। बाबालाई सुनायौ भने बाबाले सावधान गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– पाप गरेका छौ भने रजिस्टरमा लेख र बतायौ भने तिम्रो पाप आधा खतम हुन्छ। सुनाउँदैनन्, लुकाउँछन् भने फेरि गरि नै रहन्छन्। श्राप मिल्छ। बताउँदैनन् भने एकपटकको सट्टा १०० पटक गरिरहन्छन्। बाबाले कति राम्रो राय दिनुहुन्छ तर कसै-कसैलाई अलिकति पनि असर हुँदैन। आफ्नो तकदिरलाई मानौं लात मारिरहन्छन्। धेरै-धेरै नोक्सान गर्छन्। अन्त्यमा सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ। यो-यो बन्छौं, क्लासमा चढ्दा मार्कसीट मिल्छ नि। ट्रान्सफर हुनु भन्दा पहिला रिजल्ट निस्कन्छ। तिमी पनि आफ्नो क्लास चढ्दा नम्बर थाहा हुन्छ फेरि रुनेछौ अनि के गर्न सक्छौ? रिजल्ट त निस्किसक्यो। जो तकदिरमा थियो त्यो लियौ। बाबाले सबै बच्चाहरूलाई सावधान गर्नुहुन्छ। कर्मातीत अवस्था अहिल्यै हुन सक्दैन। कर्मातीत अवस्था भएपछि त फेरि शरीर छोड्नुपर्छ। अझै केही न केही विकर्म बाँकी रहेको छ, हिसाब-किताब छ त्यसैले योग पूरा लाग्दैन। अहिले कसैले पनि भन्न सक्दैन, हामी कर्मातीत अवस्थामा छौं। नजिक आइपुगेपछि फेरि धेरै निशानीहरू देखिन्छन्। सारा कुरा तिम्रो अवस्थामा र विनाशमा आधारित छ। तिम्रो पढाइ पूरा हुन थालेपछि फेरि लडाई शिरमा खडा भएको देख्छौ। अच्छा!
१) मायाको वश भएर कुनै पनि आसुरी चालचलन हुनु हुँदैन। आफ्नो चालचलनको रजिस्टर राख्नु पर्छ। यस्तो कुनै कर्म नगर जसले गर्दा पछुताउन परोस्।
२) धेरै प्यार र नम्रतापूर्वक सेवा गर्नु छ। मीठो बन्नु छ। मुखबाट आसुरी बोली निकाल्नु हुँदैन। सङ्गको धेरै-धेरै सम्हाल गर्नु छ। श्रीमतमा चलिरहनु छ।
मनसा संकल्प वा वृत्तिद्वारा श्रेष्ठ भाइब्रे स न्सको सु वास फैलाउने शिवशक्ति कम्बाइन्ड भव जसरी आजकल स्थूल सुगन्धका साधनहरूबाट गुलाब, चन्दन र भिन्न-भिन्न प्रकारको सुवास फैलाउँछन् त्यस्तै तिमी शिवशक्ति कम्बाइन्ड बनेर मनसा संकल्प वा वृत्तिद्वारा सुख-शान्ति, प्रेम, आनन्दको सुगन्ध फैलाऊ। दिनहुँ अमृतबेला भिन्न-भिन्न श्रेष्ठ भाइब्रेसनको फोहोरा जस्तै आत्माहरू माथि गुलाबजल बर्साऊ। केवल संकल्पको अटोमेटिक स्विच अन गर्यौ भने विश्वमा जो अशुद्ध वृत्तिको दुर्गन्ध छ, त्यो समाप्त हुन्छ।
सुखदाताद्वारा सुखको भण्डार प्राप्त हुनु– यही उहाँको प्यारको निशानी हो।